Shiinaha M640 nooca wax lagu sawirayo kuleylka ee wax soo saar iyo warshad | Dianyang
1 Waxyaabaha Wax Soo Saarka
1. Badeecadu way yartahay wayna fududahay in la dhexgalo;
2. FPC interface ayaa la qaatay, taas oo hodan ku ah isdhaafsiga isla markaana ay fududahay in lala xiriiro barnaamijyada kale;
3. Isticmaal awood yar;
4. Tayada sawirka sare;
5. Qiyaasta heerkulka saxda ah;
6. isdhexgalka xogta istaandarka ah, taageerida horumarka labaad, isdhexgalka fudud, taageerida marin u helidda meeraadyo kala duwan oo farsamo caqli leh
Sawirka kuleylka ee infrared wuxuu jabayaa caqabadaha muuqaalka ee fiisigiska dabiiciga ah iyo waxyaabaha caamka ah, wuxuuna cusbooneysiiyaa muuqaalka waxyaabaha. Waa saynis casri ah iyo tiknoolajiyad casri ah, oo door togan oo muhiim ah ka ciyaareysa adeegsiga howlaha militariga, wax soo saarka warshadaha iyo qeybaha kale. Waa nooc ka mid ah qalabka adeegsada teknoolojiyada imbiyuutarka teknolojiyada infrared si loogu beddelo sawirka qaybinta heerkulka shayga muuqaal muuqaal iyadoo la ogaanayo shucaaca infrared ee shayga, farsameynta calaamadaha, beddelka sawir-qaadaha iyo qaabab kale.
Naqshadeynta kuleylka kuleylka ah ee infrared waxay ka sameysantay mashiin weyn oo aalad la qaadan karo oo loogu talagalay baaritaanka goobta, taas oo ay fududahay in la qaado oo la qaado. Si buuxda iyada oo loo tixgelinayo baahiyaha isticmaalaha iyo arrimaha deegaanka, qaabkani waa mid dareen leh oo kooban, iyadoo ganacsiga madow yahay midabka ugu weyn iyo jaalaha indhaha qabta ee qurxinta. Kaliya maahan inay dadka siiso dareenka bilicsanaanta sayniska iyo teknolojiyadda sare, laakiin sidoo kale waxay muujineysaa tayada xooggan ee waarta ee qalabka, kaas oo la jaan qaadaya astaamaha warshadaha ee qalabka. Naqshadeynta waxsoosaarka saddex caddeyn ee warshadeynta, habka daaweynta dusha sare ee wanaagsan, oo leh biyo-celin wanaagsan, boodh-celin la'aan, waxqabadka shoogga, oo ku habboon dhammaan noocyada jawiga adag ee warshadaha Naqshad guud waxay la jaanqaadeysaa ergonomics, is-dhexgalka maskaxda qofka iyo mashiinka, qabashada gacanta oo wanaagsan, dhibic ka hortagga, ogaanshaha la-xiriirka aan tooska ahayn iyo aqoonsiga, hawlgal ka badbaado badan oo fudud.
Codsi wax ku ool ah, sawir-qaadaha kuleylka ah ee gacanta lagu hayaa waxaa badanaa loo isticmaalaa cilad-warshadeed, kaas oo si dhakhso leh u ogaan kara heerkulka qaybaha wax-qabadka, si uu u fahmo macluumaadka lagama-maarmaanka ah, isla markaana uu si dhakhso leh u ogaan karo cilladaha qalabka elektarooniga ah sida matoorrada iyo transistors. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu ogaado xiriirka xun ee qalabka korontada, iyo sidoo kale qeybaha farsamada ee kuleylka badan, si looga hortago dabka iyo shilalka halista ah Shilalka waxay bixiyaan habab lagu ogaanayo iyo qalabka lagu baaro wax soo saarka warshadaha iyo dhinacyo kale oo badan
Qalabka sawirka kuleylka ee infrared sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay qalab digniinta dabka oo waxtar leh. Waan ognahay in aag ballaaran oo kaynta ah, dabka qarsoon inta badan aan awoodin in si sax ah loogu xukumo UAVs. Sawir qaadaha ayaa si dhakhso leh oo wax ku ool ah u ogaan kara dabkan qarsoon, wuxuu si sax ah u go'aamin karaa goobta iyo baaxadda dabka, wuxuuna ka heli karaa barta dabka qiiqa, si looga hortago oo loo bakhtiiyo sida ugu dhakhsaha badan.
Shaqada sixitaanka santuuqa ayaa sixi kara isku mid ahaanta sawirka infrared iyo sax ahaanta cabirka heerkulka.Waxay qaadataa 5-10min in qalabku ahaado mid xasilan inta lagu guda jiro bilowga Qalabka wuxuu ku bilaabayaa santuuqa asal ahaan wuxuuna saxaa 3 jeer. Intaas ka dib, waxay kuxirantahay sixitaan la'aan. Dhamaadka dambe wuxuu si joogto ah u wici karaa santarka si uu u saxo sawirka iyo xogta heerkulka.
Hore: M384 moduleka kuleylka ee infrared
Xiga: Kameradda sawir-qaadaha ee DR-23 ee infrared